Yitya usele | Tyelela uHultsfred
Ungcamle ujikeleze umasipala!
Emaphandleni, kufutshane nechibi, ukubhaka ekhaya, embindini… kukho into yazo zonke izinto ozithandayo. Yiba nekofu, isidlo sangokuhlwa esimnandi okanye uziphathe nge-pizza.
Embindini weHultsfred kukho iLavida Coffé. Kumagumbi abanzi kwaye amnandi ungathenga yonke into ukusuka kumaqebengwane kunye neepastries ukuya kwisidlo sasemini esilula. A right wena
EMazantsi eVirserum ngamancedo eDackestupet kunye neFriluftscafé - iDackestupet. Ebusika indawo yokutyibilika ekhephini kunye namanye amaxesha indawo yokuhamba ngeebhayisikile ezintabeni, iMTB kunye nokunyuka intaba. Ikhabhathi ephezulu iyavula
Ngaba unqwenela ikofu okanye ulambile? Ngaba uyafuna ikomityi yekofu esandula ukwenziwa? Okanye ngaba ufuna ukugcwalisa imoto? Sinikezela ngentengiso yokutya okukhawulezayo, iilekese,
Ukutya okuphekwe kakuhle ikakhulu kwizithako zaseSweden. Indawo yokutyela inokubhukishwa ngamaqela abucala, kunokwenzeka ukuba ufumane ukutya. UAnnika unenkulu
ELönnebergaboa, isidlo kufuneka sihlale siyinto owabelana ngayo nabahlobo, kwaye notyelelo lwakho lube yinto engaqhelekanga, ixesha lonyaka
UCharlie Pizzeria eMörlunda ubonelela ngee-pizza, ii-burger, i-barbecue kunye neesaladi. "IMörlunda pizza" inokufumaneka kuphela eCharlie Pizzeria
Akufanele uphoswe yiCafé Flotten xa undwendwela indawo yeNkampani. Ikhefi ayiqhutywa ngumbutho kwaye inegalelo kwimisebenzi yombutho. Apha unokuthenga i-ayisikhrim okanye
Phakathi kweMarlilla neVirserum uyakufumana ilali encinci Flaten kunye neBageriet Björkaholm. Apha ubhaka kwinqanaba elincinci kunye nomgangatho ophezulu wezithako. Imiqulu yesonka, ii-baguettes,
ICafé Centrum ibekwe ecaleni kwesitrato sabahambi ngeenyawo eHultsfred. Kulula ukuyifumana kunye neendawo zokupaka ezifanelekileyo kufutshane. Apha unokufumana ikhefu lekofu okanye uthenge kunye
Kunye neVetlandavägen eMarlilla yiGrandy Grill. Apha ungakhetha phakathi kweeburger, iisoseji, iibhola zenyama, kebabs, inkukhu. Ngexesha lasehlotyeni kukwakho nebala elincinci langaphandle.
Indawo yokutyela yamaTshayina-iVietnam enesiTshayina kunye nesiVietnam. Kukho uluhlu olubanzi lwezitya ezahlukeneyo, ukupheka kwasekhaya eSweden, á la carte kunye
I-Emåbaren yindawo yokutyela kunye nepizzeria. Ukutya okuphekwe ekhaya kuphakwe apha kwisidlo sasemini phakathi 1100-1400. Njengenye indlela yokutya kwanamhlanje, kukho ipitsa, iisaladi okanye kebabs.
ICentralkonditoriet yindawo yokubhaka kunye nevenkile elula apho unokufumana ikofu okanye uthenge ikhaya elisandula ukubhaka kunye nawe. Uya kufumana uluhlu lwamaqebengwana emveli, iikeyiki, iibuns
Kwindawo ejikelezayo eMålilla yiGrillstugan kwaye apha i-burger kunye neesoseji zinikwa umatshini kunye nezinye izixhobo, kunye ne-ayisi khrim. Xa imozulu ivumela, ikhona
I-pizzeria iphakathi eVirserum. Apha udla kakuhle kwizakhiwo ezimnandi. Kwi-Restaurang Betjänten uhlala ufumana inkonzo elungileyo kunye nomgangatho olungileyo. Unga
IPizzeria ibekwe embindini eHultsfred. Ukongeza kwi-pizza, i-kebabs kunye neesaladi zikwimenyu. Ehlotyeni kukho ithala langaphandle. Kukho ezingama-24
Kuphela zizinto ezikumgangatho ophezulu ezifumanekayo apha. Inyama iveliswa ekuhlaleni kwaye inyanyekelwa kakuhle. Kwivenkile uza kufumana izinto ezininzi ngenyama. Iimbambo kunye neefillets, inyama egayiweyo
Ukuhlaziywa kunye neOsten
Kwifama iRäven & Osten, eLida ngaphandle kweJärnforsen, itshizi yenziwa ngobugcisa kunye nendlela encinci. Ubisi luvela kumlimi wasekhaya. Ecaleni kobisi
"Ukutya okumnandi ngesazela esicocekileyo, ngqo ukusuka efama". Apha unoku-odola inyama evelisiweyo kunye neyasekhaya. Ukutyelela okanye ukhenketho kwaye uphile kwifama ye-organic, dibana
IiAxelssons kunye noAby
Ivenkile yasefama yindawo yokundwendwela enomdla kwabo bafuna ukuthenga iimveliso ezikumgangatho ophezulu. Ngexesha le-strawberry, ungahamba uyokukhetha owakho amaqunube. NGAPHAKATHI
IPizzeria Tre kronor
IPizzeria eHultsfred elungileyo ecaleni kukaWillys. Pizza, kebabs, gyros, salads kunye burger bakhonza apha. Inika ii-pizza ezilungileyo kakhulu, abasebenzi abanobuhlobo